Manchester United oo dalab qaali u soo bandhigtay David de Gea si uu u saxiixo heshiis cusub – Gool FM
(Manchester) 14 Dis 2018. Goolhaayaha kooxda Manchester United ee David de Gea ayaa qarka u saaran inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxdiisa Red Devils, islamarkaana uu sii joogo garoonka Old Trafford.
Wargeyska “The San” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in David de Gea uu haatan wada hadalo la furtay saraakiisha Manchester United si uu u saxiixo heshiis cusub.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in David de Gea uu ku war galiyay saaxiibadiis kooxda Manchester United inuu ku dhow yahay saxiixida heshiis cusub uu ku sii joogayo garoonka Old Trafford.
Manchester United ayaa dooneysa in David de Gea ay ka dhigto goolhaayaha ugu mushaarka badan aduunka, maadaama ay doonayaan in ay mushaar ahaan isbuucii u siiyaan aduun dhan £ 400,000, halka uu haatan muushaar ahaan u qaato 200,000 oo kaliya.
Heshiiska uu David de Gea ku joogo kooxda Manchester United ayaa wuxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa dooneysay inay hesho adeega goolhaayaha reer Spain ee David de Gea, waxayna doonayaan inay ku dalbadaan saxiixiisa qiimo dhan 60 milyan oo ginni.
Waa kuwee 32-da kooxood ee isugu soo haray Europe League, Goorma ayaa la sameynayaa isku aadka, Miyay isku aadi karaan Chelsea iyo Arsenal iyo Wax kasta oo aad u baahan tahay